Ny tahan'ny fampandrenesana tranonkala amin'ny alàlan'ny indostria sy torohevitra
Alakamisy, Septambra 1, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Tsy mbola mpankafy fampiasa lehibe mihitsy aho bounce rate ho toy ny tondro fampisehoana lehibe ny zava-bitan'ny tranokalanao amin'ny ankapobeny. Ny tahan'ny fihenam-bidy dia mety miovaova be amin'ny orinasa iray mankany amin'ny manaraka miankina amin'ny fanatsarana sy ny filaharan'ny motera fikarohana. Raha mitana ny laharam-pahamehana mifandraika amin'izany ianao dia mety manana taha ambany ambany. Raha laharam-pahamehana ho an'ireo tsy misy dikany ianao, dia mety hiakatra ny taha azonao.
ny fahafahana misafidy indray mandeha dia niara-niasa tamin'ny mpanonta an-tserasera iray izay nahazo ny volany rehetra tamin'ny doka ary niahiahy momba ny tahan'ny famoahana azy izy. Na izany aza, ny fitsapana matetika dia nidika fa nanindry ny doka ny olona! Ny fananana taha avo indrindra dia ny tombotsoany… izay no nahazoany vola. Ka nampiharinay ny lojika handrefesana ny tsindry rohy ivelany nataony ary nanamafy izany!
Raha manao orinasa amin'ny Internet ianao ary manana ny fananganana Google Analytics amin'ny tranokalanao, dia azo inoana fa fantatrao ny tahan'ny fiakaran'ny tranokalanao. Saingy, misy zavatra fantatrao momba ny fanisana azy, ny tahan'ny tsimok'aretin'ny indostria misy anao na koa inona aza ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny taham-pitondranao? Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fanontaniana mahazatra efa renay, ity infographic ity dia natao hanomezana anao valiny sy torohevitra vitsivitsy hanampiana anao hanatsara ny tahan'ny fihenam-bidy. From Kissmetrics.
Ahoana ny fanatsarana ny EdgeRank amin'ny Facebook